Dagaal Culus oo goor dhow ka bilowday magaalada Baledweyne – Qaranimo Online
You are here: Home 2016 May 17 Dagaal Culus oo goor dhow ka bilowday magaalada Baledweyne
Dagaal Culus oo goor dhow ka bilowday magaalada Baledweyne
Muqdisho, May 17, 2016: Wararka an mar dhow ka helnay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in xaafad ka tirsan magaalada ay ka socdaan dagaallo culus oo hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsanayo, welina socdo.
Dagaalka oo ka socda dhinaca galbeed ee magaalada Beledweyne ayaa waxa uu u dhaxeeyaa maleeshiyo beeleedyo iska soo horjeeda, iyadoo daryanka rasaasta la isweydaarsanayo laga maqlayo guud ahaan magaalada iyo meelaha u dhow.
Ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa dadka rayidka ah ayaa hakad ku yimid, kaddib markii rasaas wiifto ah ay ku dhacday goobo ay dadku ku badan yihiin.
Sida la sheegayo ,Dagaalka oo si xowli ah ku socda, ma jirto ilaa iyo iminka sheegatay inay ka dambeyso dagaaladaasi, iyadoo aan la ogeyn qasaaraha rasmiga ah ee dagaaladaasi ay geysteen, hase yeeshee dib ayan idin kaga sheegi doonnaa.
AMISOM oo ka guuraysa Saldhig ku yaal Gudaha Magalada Muqdisho July 11, 2017
Sidee Farmaajo iyo Kheyre ku xaqiijin karaan kalsoonida shacabka. May 10, 2017
Magaca iyo Astaan Calanka Maamulka Hiiraan iyo Sh/dhexe oo la dalbay in la soo gudbiyo. September 24, 2016
Faroole oo sheegay inuu yahay Musharax u taagan xilka Madaxweynaha Soomaaliya April 4, 2016
“Waxaan qaadeynaa Tallaabo kasta oo lagu qanciyo beelaha ka carooday shirkii Jowhar” March 16, 2016
Puntland: “Gabre waain dalka laga saaro” February 4, 2017
Barnaamijka Dood Wadaag Tarsan vs Jawahir ee Universal TV. December 29, 2016
R/Wasaarah Soomaaliya oo maanta Muqdisho kaga qayb galay maalinta Ololaha Nadaafada July 27, 2017
Dibadbax, berri, ka dhici doona Muqdisho (gees ka gees.) July 10, 2016
Somalia fuels child slavery through the use of young soldiers December 3, 2015